मेसीलाई विश्वकप मुस्किल
दीपेन्द्र गुरुङ मंगलवार, आश्विन २४, २०७४
5234 पटक पढिएको
दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगिता शुरु भएको सय वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा दक्षिण अमेरिकी फुटबल महासंघ (कनमेबोल) ले गत वर्ष कोपा अमेरिका सेन्टेनारियो (सतवार्षिकी) को आयोजना गर्‍यो । कोपा अमेरिकाको यो विशेष संस्करणमा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरू मात्रै सहभागी थिएनन् । कनमेबोलले उत्तर र केन्द्रीय अमेरिका तथा क्यारेबियन राष्ट्रहरूलाई पनि सहभागी गराएको थियो । फाइनलमा उपाधिका लागि लियोनल मेसीको टोली अर्जेन्टिनाले चिलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको फाइनल खेल निर्धारित ९० र त्यसपछि थपिएको ३० मिनेटको समयमा पनि टुंगिएन । प्रतियोगिताको उपाधि टाइब्रेकरमार्फत गर्नुपर्ने भयो, जसमा अर्जेन्टिना अभागी ठहरियो । टाइब्रेकरमा मेसीकै प्रहार गोलमा परिणत हुन नसक्दा अर्जेन्टिना उपाधिबाट चुक्यो ।
चिलीका खेलाडी खुशियाली मनाउँदै थिए, यता मैदानमै मेसीको आँशु खस्यो । मेसी ड्रेसिङ रूपमा पनि पुगेका थिएनन्, समाचार भाइरल बन्यो– ‘मेसीले राष्ट्रिय टोली त्यागे’ । मतलब, मेसीले राष्ट्रिय टोलीबाट सन्यास लिए । अंग्रेजी भाषाका न्युज पोर्टलहरूमा लेखिएको थियो– ‘मेसी आफ्नो राष्ट्रिय टोलीको जर्सी, कप्तानको आर्म ब्यान्ड र बुट सदाका लागि झुण्ड्याउन चाहन्छन् ।’मैदानमै मेसीले झारेको आँशु र त्यससँगै अकस्मात आएको उनको सन्न्यासको खबरले उनका करोडौं समर्थक आश्चर्यमा मात्रै परेनन्, उनीहरूलाई दुःखी पनि तुल्यायो । ती समर्थकले विभिन्न तरिकाले मेसीलाई सन्न्यासको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरे । त्यसमा अर्जेन्टिनी राष्ट्रपति मउरिसियो माक्रीदेखि महान् फुटबलर डिएगो म्याराडोना पनि सामेल भए ।
अन्ततः सन्न्यासको घोषणा गरेको तीन महिना पनि नबित्दै मेसीले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिए र राष्ट्रिय टोलीमा फर्किए । मेसीले आफूले राष्ट्रिय टोलीमा फर्किनुको कारण खुलाएका थिए, ‘अर्जेन्टिनी फुटबलमा धेरै समस्या छन् । म अर्काे समस्या थप्न चाहन्नँ ।’सन्न्यासको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुमा मेसीले भनेकै कारण हुन सक्छन् । तर विश्लेषकहरूको अरू तर्क पनि छन् । कोपा सेन्टेनारियो मेसीको नेतृत्वमा अर्जेन्टिनाले बेहोरेको लगातार तेस्रो ठूलो फाइनल थियो । मेसीकै नेतृत्वमा अर्जेन्टिनाले सन् २०१४ मा ब्राजिलमा भएको विश्वकपको फाइनल खेलेको थियो । जसमा जर्मनीसँग अतिरिक्त समयमा १–० ले पराजित भएपछि उपाधिबाट वञ्चित भयो ।
सन्न्यासको घोषणा गरेको तीन महिना नबित्दै मेसीले निर्णय फिर्ता लिए र राष्ट्रिय टोलीमा फर्किए।
त्यसको वर्ष दिनपछि नै अर्जेन्टिनाले चिलीमा भएको कोपा अमेरिकाको फाइनल पनि खेल्यो । घरेलु टोलीसँगको पराजयसँगै मेसी फेरि पनि अर्जेन्टिनालाई उपाधि दिलाउन असफल भए । त्यसपछि भएको कोपा सेन्टेनारियो तेस्रो फाइनल थियो, जसमा उनको टिमले अघिल्लो दुई फाइनलकै नतिजा बेहोरेको थियो । लगातार तीन ठूला फाइनल गुमाउनुको पीडाले पनि मेसीलाई सन्यासको अप्रिय निर्णय लिन बाध्य बनायो ।तर, जतिवेला मेसी ठूला प्रतियोगिताको उपाधिनजिक पुगेर असफल हुँदा उता समकालीन क्रिस्टियानो रोनाल्डोले आफ्नो देश पोर्चुगललाई युरो कप २०१६ को उपाधि दिलाए । मेसी कोपा सेन्टेनारियो फाइनलको ट्राइब्रेकरमा गोल गर्न चुकेको करिब १५ दिनपछि रोनाल्डोले युरो कप जितेका थिए ।
स्पेनी क्लब बार्सिलोनाका लागि गोल र उपाधिको सबै कीर्तिमान आफ्नो नाममा बनाएका मेसीमाथि राष्ट्रका लागि उपाधि दिलाउन नसक्दा पैसाका लागि मात्रै खेल्ने खेलाडीको ‘ट्याग’ झुण्डिन थालेको थियो । रोनाल्डोले युरो कप जित्दा उनीमाथि त्यसको दबाब अझ बढेको अनुभव उनले पनि गरेका थिए, सायद । त्यसैले मेसी नयाँ सोचका साथ राष्ट्रिय टोलीमा फर्किए ।सन्यासको घोषणापछि पहिलो पटक सार्वजनिक हँुदा मेसीले आफ्नो कालो कपाललाई खैरो गरी रंग्याएका थिए । सधैं सफाचट् देखिने उनले झुसे दाह्री, जुंगा पालेका थिए ।
बार्सिलोनाकै एक प्रकाशनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘पुरानो गेटअप मलाई फापेन, त्यसैले कपाललाई रंग्याएँ । दाह्री पनि पालेको छु ।’ उनले त्यसपछिको लामै समय खैरो कपाल र लामो दाह्रीमा खेले । आजभोलि उनको कपाल कालो बन्दै गएको छ । उनले आफ्नो कपाललाई फेरि खैरो बनाउने प्रयास नगरेको हुन सक्छ । तर, दाह्री भने उस्तै छ ।यद्यपि, त्यसले उनका लागि राष्ट्रिय टोलीको नतिजामा कुनै प्रभाव पारेको देखिएन । बरु, उनको सन्यासबाट फर्किएपछिको पहिलो महत्वपूर्ण प्रतियोगिता (रूसमा आयोजना हुने विश्वकप)को छनोट मेसीका लागि अझै मुस्किल बनेको छ ।
अर्जेन्टिनालाई अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि दिलाउने मेसीको इच्छा र उद्देश्य पुन: पुरा नहुने संकेत देखिएको छ। प्रश्न उब्जिएको छ,के त्यसबेला मेसीले फेरि सन्यासको घोषणा गर्लान् ?
मेसीकै कप्तानीमा गत संस्करणको विश्वकपको फाइनल खेलेको अर्जेन्टिनालाई यस पटक भने छनोटमै मुस्किल देखिएको छ । दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रबाट विश्वकपमा चार टोली सीधै छनोट हुने गर्छन् । तर, छनोट चरणको अन्तिम दुई खेल मात्रै बाँकी रहदा अर्जेन्टिना पाँचौ स्थानमा छ । ब्राजिलले यसअघि नै छनोट पक्का गर्दा बाँकी तीन स्थानका लागि अर्जेन्टिनाले आफूभन्दा तीन अंक बढी रहेको उरुग्वे, दुई अंकले माथि रहेको कोलम्बिया र समान अंकका बाबजुद गोल अन्तरमा अघि रहेको पेरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ । गत मार्चमा बोलिभियासँग २–० ले पराजित भएपछि समस्यामा परेको अर्जेन्टिनाले त्यसपछि पनि लगातार दुई खेलमा बराबरीमा चित्त बुझायो । गत अगस्टमा उरुग्वेसँग गोलरहित बराबरी तथा सेप्टेम्बरमा भेनेजुएलासँग १–१ को बराबरीमा रोकिँदा अझै पनि टोलीको कप्तानी गरिरहेका मेसीमाथि आफ्नो देशलाई विश्वकपमा छनोट गराउन दबाब थपिएको छ ।
यी पछिल्लो दुई खेलको बराबरीबाट अर्जेन्टिनाले पूर्ण तीन अंक लिन नसकेपनि १/१ अंक लिई नै रहेको छ । यद्यपि, प्रायः खेलमा जितकै आवश्यकता रहेको अर्जेन्टिनाको छनोट सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ ।अर्जेन्टिना बाँकी दुई खेलमा जित हात पार्दै विश्वकपका लागि सीधै छनोट हुन पनि सक्छ । सीधै छनोट नभए पनि प्लेअफमार्फत् पनि २१ औविश्वकप सम्म पुग्न सक्नेछ । तर, यसअघि दुई पटक विश्व कप जितेको, तीन पटक उपविजेता बनेको तथा डिएगो म्याराडोना र लियोनल मेसीको देश अर्जेन्टिनालाई विश्वकप छनोटकै लागि यत्तिको मुस्किल पर्नु आफैंमा आश्चर्यको कुरा हो । सन् २०१५ को अक्टोबरबाट शुरु भएको रूस विश्वकप छनोट प्रतियोगितामा अर्जेन्टिनाको प्रदर्शन शुरुवातबाटै निकै कमजोर बन्यो ।
अहिलेसम्म खेलेका १६ खेलमा अर्जेन्टिनाले औसतमा प्रतिखेल एक गोल मात्रै गर्न सकेको छ । विपक्षीबाट १५ गोलसमेत बेहोरिसकेकाले गोलअन्तरमा समेत अर्जेन्टिना पछि परेको छ ।यस्तै, प्रदर्शनले छनोट चरण पार गरे पनि अर्जेन्टिनालाई अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि दिलाउने मेसीको इच्छा र उद्देश्य पुनः पूरा नहुने संकेत देखिएको छ । प्रश्न उब्जिएको छ, के त्यसवेला मेसीले फेरि सन्यासको घोषणा गर्लान् ? या फेरि अर्काे विश्वकपका लागि प्रयास गर्लान् ? त्यसका लागि कुर्नैपर्छ ।